စူပါမားကက်က..အဖြစ်ကလေး..။။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » စူပါမားကက်က..အဖြစ်ကလေး..။။
Posted by “ဘီလူးကြီး”ogre on Aug 29, 2011 in Copy/Paste | 31 comments
ခိုးယူသူ နှင့် ပစ္စည်းသိမ်းသူ
မိဘအုပ်ခြင်းမကင်းတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်က (ကလေးဆိုတာ “၁၀”နှစ်ကနေ“၁၈”နှစ်အတွင်းလောက်တော့၇ှိမယ်ဗျ
ရန်ကုန်ဆင်ခြေဖုံး မြို့နယ်လေးတွေမှာ လိုက်လံဖွင့်ထားတဲ့ စူပါမားကက် ခေါ်မလား မီနီမားကက် ခေါ်မလား အတန်ငယ်
နာမည်ရနေတဲ့ စူပါမားကက် ကလေး တစ်ခုမှာ ကလေးမ တစ်ယောက်က ဈေးဝယ်ရင်း ချောကလက် နှစ်ချောင်း
ခိုးပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေက ဖမ်းဆီးရမိလို့ ခိုးယူမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဗျ ချောကလက်ရဲ့တန်ကြေးကတော့ ကျွန်တော်
အထင် ချောကလက်အချောင်လေးများဟာ ၈၀၀ တန်ကနေ ၁၈၀၀ တန်လောက်အထိရှိပါတယ် အဲလောက်တန်ကြေးရှိတဲ့
ချောကလက်ဖမ်းဆီးရမိတာကြောင့် စူပါမားကက် တာဝန်ရှိသူတွေက ပေးလျှော်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ဟန်တူပါတယ် အချို့သော
စူပါမားကက်များဟာ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ပစ္စည်းတန်ကြေးရဲ့ အဆ နှစ်ဆယ် တန်းဖိုးပေးလျှော်ရတယ်လို့ သိရပါတယ် အဲဒီ
ခိုးယူတဲ့ကလေးမလေးဟာသာမာန် ဆင်းရဲသားဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ တန်းဘိုးကိုပေးလျှော်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့
အတွက် သူမှာပါလာတဲ့ မိဘကဆင်ပေးထားတဲ့ နားကပ်လေးတစ်ရံကို အပေါင်အဖြစ်ထားခဲ့ရပါတယ် ..။။။
ကလေးမရဲ့မိဘတွေကတော့ ယခုချိန်ထိ သူတို့သမီးလေးကိုဆင်မြန်း
ပေးထားတဲ့နားကပ်ဟာ နှစ်ဖက်စလုံးထူးဆန်းစွာ ကျပျောက်ခဲ့ရ တယ်လို့သိထားကြရှာပါတယ်…..။။။
အဲဒီစူပါမားကက် ကတာဝန်ရှိသူတွေဟာ ယခုအချိန်မှာ အပေါင်အဖြစ်ထားခဲ့တဲ့ နားကပ်နှစ်ရံနဲ့ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိ
စဉ်းစားရ ကြပ်နေကြပါတယ်(ကျွန်တော့ အထင်ပါ) ကလေးမက ထပ်မံဆက်သွယ်ပြီးငွေကြေးနဲ လဲလှယ်ခြင်းမရှိ တော့လို့
အဲဒီနားကပ်ရဲ့တန်ကြေးဟာ အခုခေတ်ပေါက်ဈေးနဲ့ ဆို လေးသောင်းကနေ ရှစ်သောင်းကြားမှာ၇ှိပါတယ်..။။
ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ကျွန်တော့အမြင်ပြောရရင် ကလေးမရဲ့ခိုးယူမှုဟာ ခိုးမှုသပ်သပ်ပါ ငွေကြေးနဲ့ပေးလျှော်ခြင်းကိုလက်မခံပဲ
ငွေကြေးမပါတဲ့အတွက် ကလေးမပိုင်ပစ္စည်းကိုသိမ်းဆည်းထားခြင်းဟာ သာမာန်အမြင်အရ ဘယ်လိုမှ မနေပေမယ့် ကျွန်တော့်
အမြင်အရတော့ခြောက်လှန့်တောင်းယူမှုနဲ့ ညှိစွန်းနေပါတယ် ရဲလက်ကိုမအပ်ခြင်ရင် သူကိုအုပ်ထိမ်းတဲ့မိဘကို ခေါ်ယူ
ရှင်းလင်းရမှာဖြစ်ပေမယ့်ခေါ်ယူရှင်းလင်းခြင်းမရှိတဲ့အပြင် ခိုးယူပစ္စည်းကိုလဲ ပြန်ယူထားတယ် ကလေးမပိုင်ပစ္စည်းကို
သိမ်းဆည်းထားခြင်းဟာ သဘာဝမကျ တဲ့ဖြစ်စဉ်ပါ နောက်တစ်ချက်က ခိုးယူပစ္စည်းရဲအဆ နှစ်ဆယ် ပြန်လည်ပေးလျှော်ရမယ်
ဆိုတာဟာ ဘယ်စာအုပ်ထဲက ဥပဒေပါလဲ ပြန်ပေးလျှော်ခဲ့ရင့် ရော အဲဒီပေးလျှော်မှုဟာ တရားဝင်ပါရဲ့လား …။။။
အဲဒီကလေးမအတွက်ဘာလုပ်ပေးသင့်တယ် ဆိုတာကျွန်တော်အခုထိစဉ်းစားလို့မရနိုင်သေးပါဘူး စူပါမားကက်တာဝန်ရှိ
သူတွေကိုရော ကျွန်တော် ဘယ်လိုပြောရမလဲ …။။
“ခိုးယူတာမှန်ကန်ရင် အမှုဖွင့်တရားစွဲပါ မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်ပါ..။။
“နောက်တစ်ခုက ကလေးမရဲ့ ယခင်ကထိုကဲသို့ ပြစ်မှုမျိုး ကြူးလွန်ခဲ့ဖူခြင်းရှိ /မရှိ လေ့လာပြီး ဆက်လက် စာရိတ္တမပျက်
ပြားစေရေးဆွေးနွေး ပညာပေးခြင်းဖြင့် သက်ညှာစွာ တာဝန်ရှိလူကြီးနဲ့ မိဘအုပ်ထိမ်းသူထံ စနစ်တကျအပ်နှံပါ…။။
“ဒီကြားထဲကမှ ခိုးယူခြင်းပေါ်ပေါက်ရင် အလိမ္မာ နည်းဖြင့် ငွေရှင်းကောင်တာမှာ ကျသင့်ငွေ ရှင်းလင်းပါစေ..။။
မိတ်ဆွေတို့ရော ဘယ်လိုသဘောရလဲ….အကြံကောင်းလေးများရှိခဲ့ရင် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်မနစ်နာရအောင်
လူငယ်ဆိုတဲ့ အသက်အရွယ် အထူးသဖြင့် .. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လေးတွေဟာ စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခု ထိခိုက်မိသွားပြီဆိုလျှင် သေရာပါအောင် စွဲတတ်ကြတယ် … (ကိုယ်တွေ့ပါ) ။ ဒါကြောင့် လူကြီးတွေ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံ စနစ်တကျဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် … မုန့် ကတန်ဖိုးမရှိဘူး ဆိုပေမဲ့ … လစ်လျှူရှုလို့တော့ မရဘူးပေါ့.. သို့သော်လည်း အလဲလှယ်လုပ်ပြီး နားကပ်ထားခဲ့ခိုင်းတာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါဘူး … ။
လူအများကြားမှာ မဖြေရှင်းပဲ …. အေးအေးဆေးဆေး ကလေးကို ရုံးခန်းခေါ်သွားပြီးတော့မှ … ချောကလက်လိုချင်ရတဲ့ အကြောင်း သေချာမေးသင့်တယ် … ။ ပြီးတော့မှ ဒီလိုလုပ်လျှင် ဘယ်လို ပြစ်မှူမြောက်တယ်ဆိုတာမျိုး နားလည်အောင် ရှင်းပြသင့်ပြီး … ချောကလက်ဖိုး လျှော်လိုက်သင့်ပါတယ်(မယူသင့်) … … ဒါမှ … ကလေး အသိဝင်ပြီး နောက်ပိုင်း အလားတူကိစ္စမျိုးမဖြစ်မှာ …… ။ ပိုက်ဆံ တစ်ထောင် နှစ်ထောင်လောက်နဲ့ .. ကလေးရဲ့ အသိ လဲလှယ်တဲ့ ပုံစံမျိုးပါပဲ … ဒါပေမဲ့ .. စူပါမားကတ်က တာဝန်ရှိသူတယောက်က ဒီပိုက်ဆံအနည်းငယ်လောက် ကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ လူလည်း ဖြစ်ရဦးမယ် … ရောင်းတဲ့လူတွေကတော့ … အိတ်စိုက်ရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ … ။
မှန်ပါတယ်….ချောကလက်ဖိုး ရော်ခိုင်းတာထက်စာရင် နောက် ဒီအကျင့်ဆိုးပျောက်အောင် နှုတ်နဲ့ ဆုံးမပဲ့ပြင် ပေးလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ…
ပိုက်ဆံရှစ်ရာ တစ်ထောင်ထက် ကလေးမလေးရင်ထဲက တသက်လုံး ဖြစ်သွားမယ့်ဒဏ်ရာကို သူတို့ ပို အလေးထားသင့်ပါတယ်။
ပေါင်မုန့်ခိုးလို့ လက်ကိုကားကြိတ်ခံရတဲ့ကလေးလောက်တော့ မဆိုးသေးဘူးပြောရမယ်
အဲဒီကလေးမလေးမှာ အုပ်ထိန်းသူရှိရင် တိုက်ရိုက်ခေါ်တွေ့သင့်ပါတယ်
ဒါမှ ကလေးတွေခိုးတတ်တာ တိုက်ဖျက်ရာရောက်မှာ
ကလေးရဲ. နားကပ်ကို ယူထားတာတော. သိပ်သဘောမတွေ.မိဘူးဗျ
ဒီကိစ္စအတွက် ကြားဝင် အမုန်းခံဖြေရှင်းပေးရမှာ ဖြစ်လို့ပါ..။။။
အင်းလေ ကိုဘီလူးကြီးအဆင်ပြေပါစေ။ကလေးအရွယ်မှာလိုချင်လို့ လုပ်မိယုံသက်သက်နေမှာပါ။လူကြီးတွေက လုပ်ပြနေရင်တော့ဆိုးပီဘဲ။ပြဿနာပြေလည်ပါစေ။
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်၊ ပီးတော့ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ စဉ်းစားမရဘူး။
ဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင် ဝင်ပြောမိရင်လဲ အကူအညီပေးရာမရောက်ဖြစ်မှာ။
ဟေ့ဟေ့ ဘီလူးကြီး ။ ဒီပိုစ့်နဲ့ ဆိုင်တော့ မဆိုင် ကြုံလို့ ပြောရဦးမယ်။
ခင်ဗျားတို့ နားက လိမ္မော် ဆိုလား နာနတ်ဆိုလား မီနီမားကတ် တခု ရှိတယ် မှတ်လားဗျ။
ခင်ဗျား အဲဒီမှာ ဈေးဝယ်ရင် ချီးပါ သေးပေါက် အိမ်မှာ (သို့ ) ရုံးမှာ အပြီးလုပ်သွားနော်။
စောက်ကျိုးနည်း ဈေးလာဝယ်တဲ့ ဖောက်သည်က ချီးဖင်ဝမှာ တစ်လို့နေရာမှာ ထွက်ကြတော့မဲ့
အခြေအနေရောက်နေပြီ။ ဆိုင်ဝန်ထမ်း ဘယ် အကောင် ဘယ်ကောင်မကို ပြောပြော အိမ်သာက
၀န်ထမ်းတွေပဲ သုံးခွင့်ရှိပါတယ်တဲ့။ ကြားဖူးလား ကမ္ဘာပေါ်မှာ ????????
ကောင်းလိုက်တဲ့ Customer Care Service ။ ဘယ် မအေလိုးတွေက သင်ပေးထားလဲ မသိဘူး။
အဲဒီနေ့ ကစလို့ ကျုပ် ဘယ်တော့မှ အဲဒီ မားကတ်မှာ မ၀ယ်တော့ဘူး။ ကျုပ်နဲ့ ပါတ်သပ်တဲ့ လူအားလုံး
(အားလုံး) ကိုလဲ ပြောထားတယ်။ အဲဒီ မားကတ်မှာ ချီးကုန်း စက္ကူတောင် မ၀ယ်ပါနဲ့ လို့ ။
ဒင်းတို့ သိထားဖို့ က မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်လိုနေရာမှာ ဖောက်သည်က ၀ယ်ယူမလဲဆိုတာ ရွေးချယ်
စရာတွေများလာပြီဆိုတာပဲ။ အဲဒီ သူဋ္ဌေးက ညွှန်ကြားထားတယ် ဆိုရင် ဦးဏှောက်ရှိတဲ့ ဖောက်သည်
တွေများလာတဲ့ တနေ့ အဲဒီ လုပ်ငန်း ကျဆုံးမယ်။ စောက်သုံးမကျတဲ့ မန်နေဂျာက ညွှန်ကြားထား
တယ် ဆိုရင် အဲဒီလူကို အိမ်သာ သန့် ရှင်းရေး ၀န်ထမ်း အနေနဲ့အစားထိုးသင့်တယ်။
းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး“လိမ္မော် ဆိုလား နာနတ်ဆိုလား မီနီမားကတ် ”းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
အင်း ..nigimi77 ရေ“ ဟုတ်တော့” နေပြန်ပါပြီ
အဲဒီဆိုင်က ခင်ဗျားအပါအ၀င် ဖောက်သည်တွေအပေါ် ဘယ်လောက် မိုက်ရိုင်းမှန်းတော့ ကျနော် သေချာမသိပါဘူး… ခင်ဗျားဘက်က “ဘယ် မအေ –ိုးတွေက သင်ပေးထားလဲမသိဘူး” လို့ ရေးလောက်အောင် ဆိုတော့ အတော်လေးတော့ မိုက်ရိုင်းလွန်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်…
ဘာပဲပြောပြောပါ… ကိုယ့်အဆင့်အတန်းကို ကိုယ့်ဘာသာဖော်ပြနေတာလေ… နောက်တခါ အဲလို ရိုင်းစိုင်းတဲ့အသုံးအနှုံးမျိုးတော့ မရေးသင့်ဘူးလို့ အကြံပြုလိုပါတယ်….
Customer Care Service မရှိတဲ့ဆိုင်တွေ တချိန်ချိန်မှာ ကျဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်…
ဟ ဟ ဟေ့လူ .. စူပါမားကက် ဆိုင်နံမည် တိတိကျကျပြောလေဗျ…
S ချိုးမပြေတဲ့ ဆိုင်ကို ကြော်ငြာပေးချင်လို့ပါဗျ…
ဘယ့်နယ်ဗျာ.. သူတို့မှာပဲ အဲဒီ ..င် ကပါတယ်ထင်နေတာလား…
မြောက် ဥက္ကလာပ အ၀ိုင်းကြီး မှတ်တိုင်က Orange ပါ။
ဥပဒေကို နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများမှသာ ဥပဒေနဲ့အညီ အကြံကောင်းပေးနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
…“ဒီကြားထဲကမှ ခိုးယူခြင်းပေါ်ပေါက်ရင် အလိမ္မာ နည်းဖြင့် ငွေရှင်းကောင်တာမှာ ကျသင့်ငွေ ရှင်းလင်းပါစေ..။။
ဘယ်သူမှ သူတပါးကို ဥပဒေမဲ့ ဒါဏ်တပ်ခွင့် / ဒါဏ်ကြေး ကောက်ခံခွင့် မရှိဘူး ထင်ပါတယ်။
စူပါမားကက်တွေ အနေနဲ့ ကတော့ အလစ်သုတ်သူတွေ များလို့ မလုပ်ရဲအောင် စည်းကမ်းထုတ်တာပါ။ ခိုးတာ မိသွားတဲ့အခါ ရဲတိုင် တရားစွဲရင် ထောင်ဒါဏ်ကျခံရမှာမို့ ထောင်မကျချင်ရင် ပိုက်ဆံပေး ဆိုတဲ့သဘောလို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒါ ဥပဒေသဘောအရဆို ငွေညှစ်ရာတောင် ရောက်နိုင်ပါတယ်။
အများနဲ့မို့လို့ အဲသလိုစည်းကမ်းထုတ်တာ (တရားမ၀င်ပေမယ့်) ကောင်းပါတယ်။ ခိုးမယ့်လူက မခိုးဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
ဒီပိုစ့်ပါ ကိစ္စကတော့ တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ခိုးတဲ့သူက အရွယ်မရောက်သေးတာမို့ ရဲတိုင်ရင်လဲ ရှိပြီးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဆိုဆုံးမပြီး – အများဆုံး ရုံးမဆင်းခင်အထိ ခေါ်ထိုင်ခိုင်းထားပြီး – ပြန်လွှတ်ရုံပါပဲ။ စားစရာလေးနဲနဲခိုးတာ ဘာမှကိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ရွှေခိုးတာ ဆိုရင်တော့ တမျိုးလေ။
အဲဒီစူပါမားကက်က တာဝန်ရှိသူတွေဟာ မဖြစ်လောက်တာကို မဖြစ်လောက်မှန်း သိဘို့လိုပါတယ်။
ခိုးတာမိကတည်းက နေရပ်လိပ်စာ မိဘ အမည် စတာတွေ မေးမြန်းထားရမှာ ဖြစ်ပြီး – အခုလို နားကပ်လာမရွေးရင် အကောင်းဆုံးကတော့ အချိန်မီ သူ့အိမ်လိုက်ပြီး ပြန်ပေးဘို့ပါပဲ။
ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောရသလဲဆိုတော့ အကယ်၍ ဒီကလေးမလေးရဲ့ မိဘတွေ သိသွားပြီး ဥပဒေနားလည်တဲ့ တဦးဦးကိုတိုင်ပင်မိရင် အဲဒီစူပါမားကက်က တာဝန်ရှိသူတွေ တရားစွဲခံရပါလိမ့်မယ်။ (ကျွန်တော်နဲ့သာတွေ့ရင် ကျွန်တော့အသိ တယောက်ယောက်ဆီ ပို့ပေးလိုက်မှာပါ။) အခန့်မသင့်ရင် ဂျာနယ်ထဲပါ ပါလာနိုင်ပါတယ်။
အဲဒါထားပါတော့ – ဖြစ်သွားတာက ချောကလက်ဘားလေးမဟုတ်လား။ နှစ်ခုထဲမဟုတ်လား။ သူ့ခမျာ ခိုးတောင်စားရရှာတယ် … သနားဘို့မကောင်းဘူးလား။ အဲဒီက မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် တာဝန်ခံက ကလေးတွေကို မသနားတတ်ဘူးလား။ စေတနာမထားတတ်ဘူးလား။ သမီးရေ – နောက်ဒါမျိုးမလုပ်နဲ့နော် – ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်နော်- အခုတော့ ဒါလေးတွေ ဦးလေးက /အန်တီက ၀ယ်ကျွေးလိုက်မယ်နော် လို့ ပြောပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်တာ ပိုမကောင်းဘူးလား။
သူများကို မကောင်းတာမလုပ်စေချင်သလို –
ကိုယ်ကလဲ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ကောင်းတာလေးတွေ လုပ်ဘို့ကြိုးစားသင့်တယ် ..။
(အချို့သောစူပါမားကက်များဟာ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ပစ္စည်းတန်ကြေးရဲ့ အဆ နှစ်ဆယ် တန်ဖိုးပေးလျှော်ရတယ်လို့ သိရပါတယ် )
ဒါကတော့ ဥပဒေမှာမရှိပါဘူး။ ဒီလိုသတ်မှတ်ရတာကတော့ ဆိုင်ရှင်များဘက်က နစ်နာကြေးသဘောမျိုးရယ်၊ တရားခံကို မှတ်လောက်စေသော ဒဏ်ကြေးမျိုးရယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်လိုက်ကြတာပါ။ဒါကိုမှ တရားခံက မကျေနပ်ဘဲ ရုံးရောက် ဂါတ်ရောက်ဆိုရင် ဒီဒဏ်ကြေးထပ်များပြားစွာ ကုန်မှာ (ဘာကြောင့်လဲမရှင်းပြတော့ပါဘူး) ကိုတော်တော်များများကသိထားကြလို့ ဒီမှာဘဲ စခန်းသိမ်းသွားတာများပါတယ်။
နားကပ်ကို အပေါင်အဖြစ်ယူထားတယ်ဆိုတာ ဆိုင်ရှင်ဘက်ကကြည့်ရင် လွန်တယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ဒါလေးနဲ့ ကောင်မလေးကို ချုပ်ထားမယ်လို့ တွက်တယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ပြသနာကိုင်တွယ်ပုံညံ့ဖျင်းပါတယ်။ ကလေးမလေးက အိမ်ကိုပြောပြီး (ဒါမှမဟုတ် ပိုက်ဆံကို တခြားနည်းနဲ့ ရှာပြီး) ပြန်လာရွေးကိုရွေးမယ်လို့ ပိုင်သေတွက်ထားလိုက်တဲ့ပုံပါဘဲ။
အရွယ်မရောက်သေးသူကို ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုးလဲ ဖြစ်နေပါတယ်။တရားစွဲမယ်ဆိုရင်တော့ စွဲလို့ ရနေပါပြီ(ခိုင်လုံတဲ့ မျက်မြင်သက်သေ၊ ပစည်းသက်သေရှိရပါလိမ့်မယ်)။ (ဆိုင်ရှင်က) ကလေးမလေး သူ့ ဘာသာသူ ဆိုင်ထဲမှာ ကျကျန်ခဲ့တာကို ကျွန်တော်ကောက်သိမ်းပေးထားတာဆို သေပြီဘဲ။
သူတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပေးလျှော်လိုက်တာဟာ တရားမ၀င်ပေမယ်လို့ပေးလျှော်လိုက်တာကို ကိုယ့်ဘက်က အသိသက်သေ (လူကြီးလူကောင်းဟုအများသတ်မှတ်တဲ့လူဆိုပိုကောင်း)နဲ့ဗွီဒီယို လိုမှတ်တမ်းမျိုးရှိမယ်ဆို သူတို့ ဘာမှ ထပ်လုပ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ တရားရုံးရောက်သွားရင်တောင် ကိုယ့်ဘက်က အသာရသွားမှာပါ။
(“ခိုးယူတာမှန်ကန်ရင် အမှုဖွင့်တရားစွဲပါ မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်ပါ..။။)
ဥပဒေအရဆိုရင်တော့ ဒီထက်မှန်တာ ဘာမှမ၇ှိပါဘူး
(ဒီကြားထဲကမှ ခိုးယူခြင်းပေါ်ပေါက်ရင် အလိမ္မာ နည်းဖြင့် ငွေရှင်းကောင်တာမှာ ကျသင့်ငွေ ရှင်းလင်းပါစေ..။။)
ဒီဟာကတော့ ဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရတာ နက်နဲ ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းကတော့ မသင့်တော်ပါဘူး။သူခိုးအားပေး ဖြစ်ရပ်မျိုး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ ကလေးမလေးရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကို အရင်စုံစမ်းလေ့လာမယ်။ သူဒီတစ်ခါဘဲကျူးလွန်တာမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ ကလေးမလေးဘက်က၀င်ပါသင့်ပါရပါမယ်။
ကလေးမလေးရဲ့ မိဘတွေကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြမယ် ။ ဆိုင်ရှင်နဲ့ တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမယ်။
နောက်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင် ကိုယ့်ကလေးကိုထိန်းသိမ်းပါမယ်လို့အာမခံချက်ပေးမယ်။
သူတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း လျှော်ကြေးပေးမှ ကျေနပ်မယ်ဆိုရင် အသိသက်သေ၊ ဗွီဒီယို သက်သေ၊လျှော်ကြေးရရှိကြောင်း လက်မှတ် သက်သေယူပြီးမှ လျှော်ကြေးပေးခဲ့မယ်။
ကလေး စိတ်ဒဏ်ရာမဖြစ်ရလေအောင်တော့ လူကြီးတွေအနေနဲ့ဂရုတစိုက် ဆုံးမပေးရပါမယ်။
ကလေးမလေးကဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုင်ရှင်ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမျိုးတွေကို အစဉ်တစိုက်ပြုလုပ်နေသူတွေဆိုရင်တော့၊ သက်ဆိုင်ရာကို တိုက်ရိုက်ပြောပြတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် (ဒါကလည်း ကျွန်တော်ပြောသလို သက်သေခိုင်လုံပါမှနော်)။ နို့ မို့ ဆို အသရေဖျက်မှုနဲ့ ကိုယ့်ကို တရားပြန်စွဲကုန်ကြပါလိမ့်မယ်။
ဒါတွေကတော့ ကျွန်တော်သိသလောက် ၀င်ဆွေးနွေးတာပါ။
အသိပညာ အကြံဥာဏ်တွေတော့ အတော်လေးစုံ လင်ပါပြီ၊ ဘီလူးကြီး ရေ ဘယ်နည်းလမ်းကိုရွေးမတုန်း။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ဗျ ဒီပို့စ့်လေးကတော့ စိတ်ဝင်စားဘို့အတော်ကောင်းတာဘဲ
ကျုပ်အမြင်ကတော့ ဥပဒေတွေဘာတွေကို သိပ်တော့ခေါင်းစည်းမတတ်စေခြင်ဘူး
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ပို့စ်ရဲ့ဆိုလိုရင်းမှာကိုက မီနီမားကက်လား ဘာမားကက်လားဆိုတော့ကာ
သူတို့မားကက်တွေရဲ့ တိကျတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ
ဖြေ၇ှင်းလိုက်တဲ့ တာဝန်ရှိသူတောင် အတိကျနားလည်းပါ့မလားဆိုတဲ့
အကြောင်းအရာတိုင်းကို ပြည်ပတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေအတိုင်း တစ်သွေမတိမ်းဖြေရှင်းသင့်တယ်ဆိုပြီး
စာအုပ်လှန်တာကိုတော့ ကျုပ်က မထောက်ခံဘူး
အားလုံးကို သေခြာဖွဲ့စည်းထားတာမှမဟုတ်တာ ဆိုတော့ကာ
ကျုပ်အနေနဲ့ကတော့ အဲ့သည်ဆိုင်ကို တရားဆွဲတာတော့မဖြစ်သင့်ဘူး လို့ယူဆတယ်
ဒေါက်တာ အီးတုံး ပြောတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စေတယ် ဆိုတာကိုတော့
လက္ခံပါတယ် ဒါကိုတော့ ဆိုင်တွေရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို အရင်ပညာပေးထားရမယ်ထင်တယ် ( အထင် )
သို့သော်ငြား အခြေနေရ ဆိုင်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ကလေးအပေါ် သက်သက်ညှာတာကိုလည်း
ပြောခဲ့ပြီးသလို နေခြင်သလိုနေကြ အုပ်ချုပ်ခြင်သလို အုပ်ချုပ်နေကြပြီး
ဒီကိစ္စကြမှ စာအုပ်လှန်ရင်တော့ မနိမ့်ဘူးပြောရမှာဘဲ
ပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ တာဝန်၇ှိသူက ကလေးကို
ရှိတာလေးပေးထား လာပြန်ရွေးဆိုပြီး လုပ်လိုက်တာဟာ
ယနေ့မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်လာရင် အော်မယ် ဆဲမယ် ထုမယ် ရိုက်မယ် ဖမ်းမယ်
ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် တော်တော်ကောင်းသေးတယ်ပြောရမှာဘဲ
ဒီစနစ်တွေကလည်း အရိုးစွဲ ဝါဒလိုတောင်ဖြစ်နေတာနော်
ကျုပ်က မသိသူတွေဘက်ကနေ ရပ်တည်ပြီးသဘောရိုးနဲ့ပြောတာနော်
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ခင်ဗျားတို့တွေ ဒီကိစ္စကို ပါဝင်ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်
ခင်ဗျားတို့ဟာ တော်တော်လေးစားစရာကောင်းတဲ့ သူတွေဖြစ်တယ်လို့
ကလေးနှင့်တစ်ကွ အုပ်ထိမ်းသူတွေ တွေ့ဆုံပြီး ကလေးကိုပညာပေးမယ်
ပြီးရင် ကလေးကို အမည်နေရာမဖော်ပြဘဲ ဆိုင်နာမည်နဲ့
သတင်းတစ်ပုဒ်ဖော်ပြနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြောစရာမရှိတဲ့ ခေါဇာငပိ ဆိုသလိုဖြစ်သွားမယ်
ထင်တာဘဲ ( အထင် )
ဟို ဆယ့်လေးပေါက်ပြောတဲ့ စတိုးဆိုင်မှာ ချီးပါလို့မရတာကတော့
ကျုပ်မြင်ဘူးသလောက် စတိုးတွေအားလုံး ဒီလိုဘဲဗျ
ပြောသလို အရေးပေါ် ချီးထွက်ရင်တော့ ကျုပ်လည်းပြောတတ်ဘူး
ဘီလူးက လူကိစ္စဝင်ပါတော့ ပိုရှုပ်ကုန်မှာ စိုးပါတယ်။
ဂျပန်မှာ အဲလိုပဲ ဆူပါမားကက်တွေမှာ ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ ပစ္စည်းအလွယ်ခိုး (theft)လို့ ဖမ်းမိတဲ့အခါ ဆိုင်တာဝန်ခံအချို့က ရဲတိုင်မယ်၊ မိဘအုပ်ထိန်းသူတိုင်မယ် ခြိမ်းခြောက်ပြီး လိင်မှုကိစ္စ မတရားလုပ်ပြီးမှ အရေးမယူပြန် ပြန်လွှတ်ပေးပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ ဘောလ်ပင်လေး တချောင်း၊ စတစ်ကာလေးတခုအတွက်နဲ့ လိင်ပေးဆက်ဆံရတာပါ။ (ငွေကြေးအရပြောရရင် သူတို့အရွယ်၊ ရုပ်ရည်တွေနဲ့ ကြေးစားလိုက်ရင်တောင် အဆရာထောင်မက ကြေးရမှာပါ)။
အရှက်အကြောက်ကြီးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ၊ စာရိတ္တပျက်ယွင်းမှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဒဏ်ခတ်ရှုံ့ချတဲ့ အသိုင်းအဝန်းမှာ အဲဒီလို နိုင်ထက်ဆီးနင်း ဖြစ်ရပ်မျိုး တချိန်မဟုတ် တချိန်ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ တချို့လူယုတ်မာတွေဆို တမင်သက်သက်ကို ထောင်ဖမ်း၊ ပြီးတော့ အခန်းထဲခေါ်၊ ကင်မရာနဲ့ မှတ်တမ်းတင် ကာမဆက်ဆံပါတယ်။ အသိညဏ်မပြည့်စုံသေးတဲ့ အရွယ်တွေလည်းဖြစ်၊ အကျဉ်းထဲအကျပ်ထဲရောက်နေ၊ ပြီးတော့ လူသိရှင်ကြားဖြစ်မှာထက် ခဏတာပေးဆပ်ပြီး လူမသိသူမသိ ပြီးသွားမဲ့ ဖြေရှင်းနည်းကိုပဲ အလွယ်ဆုံးဖြတ်ကြမှာပါ။
ဥပဒေအရကြည့်ရင် စတိုးဆိုင်မှာ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခွင့်၊ ဒဏ်တပ်ပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ နားလည်မှုနဲ့ လုပ်တာကြတော့လည်း ဥပဒေချိုးဖောက်တယ်လို့ စွပ်စွဲရန် ခက်ပါမယ်။ ဒီလို အသေးအဖွဲ ပြစ်မှုလေးနဲ့ ရဲစခန်းပို့၊ ရဝတရုံးပို့ရအောင်လည်း ပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်မမျှဖြစ်ပြီး တကြိမ်တခါ မိုက်မှားသူဖြစ်ခဲ့ရင် သူ့ဘဝတခုလုံး ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ မလုပ်ပြန်တော့လည်း ထိရောက်တဲ့ အရေးယူမှုမရှိရင် နောင်ထိန်းဖို့ ခက်ပါမယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ သားသမီး၊ မောင်နှမချင်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ရှိဖို့လည်း လိုပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ ဆိုင်လုံခြုံရေးကို ထိရောက်အောင် စီမံ၊ ဖြစ်ရင် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ထား၊ အုပ်ထိန်းသူမိဘများကို အသိပေး (အချိန်ကုန်၊ ခရီးစရိတ်ကုန်တယ်လို့ အကြောင်းပြချက် မပေးပါနဲ့၊ စူပါမားကက်လို စီးပွားရေးကြီးလုပ်စားမှတော့ ကုန်ကျသင့်တဲ့ စရိတ်တခုအဖြစ် လျာထားပါ) စတိုးဆိုင်များ ကွန်ယက်ဖွဲ့ပြီး သတင်းဖလှယ်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လို ကြိမ်ဖန်များစွာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေသူများဆိုရင် ဓာတ်ပုံတွေကို ဈေးဝယ်သူတွေ မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာကပ်၊ တွေ့ရင် ဆိုင်ထဲအဝင်မခံနဲ့၊ နောက်ဆုံးမှ ရဲခေါ်သင့်ခေါ်ပါ။
ကိုရင်ကြောင်ကြီးပြောထားတာ.. သေသေချာချာ ဖတ်သင့်တယ်.။ ဒါတွေက တကယ်ဖြစ်နေ..ဖြစ်ခဲ့တာတွေ..။
အခုဖြစ်တာကလည်း .. ၁၀နှစ်အထက်ကလေးမ ဆိုတော့… တတ်နိုင်ရင်… ဒီကိစ္စကို.. မီဒီယာပေါ်(ဂျာနယ်ပေါ်) တင်ပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးထင်မိပါတယ်..။
ကိုသစ်မင်းရေ… ဂျပန်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ (ဂျပန်ခေတ်က ဂက်စတာပို ပုလိပ်ဝင်စား) သဂျီးဦးခိုင်ကိုသာ မေးကြည့်ပါဗျာ။။။ အင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာ လိမ်ပြော၊ ပိုပြောရင် ချက်ခြင်း သိနိုင်ပါတယ်။ တခုတော့ရှိတယ် အခုနောက်ပိုင်း ပညာပေး၊ ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေ ထိထိရောက်ရောက်လုပ်လို့ စာတတ်ကုန်ကြရင်တော့ မသိဘူး။ ဖြစ်ခဲ့တာ တကြိမ်တခါမက၊ ဟိုးနိုင်တီးဂွမ်တီးခေတ်က မဟုတ်တာလည်း သေချာပါတယ်။ ရုပ်ဝတ္ထုတိုးတက်လာရင် ရှောင်လွှဲမရနိုင်တာမို့ သိထားကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးမ လေးဘက် က နေ
အောင်မြင် မှု ရရှိပါစေ လို့ 
လူတွေ လူတွေတစ်ဖို့တည်းရှိတဲ့ နွားတွေနဲ့ တူနေပီ
Much better then cane punishment in some country.
ယူထားသူတွေက ပြန်ပေးဖို့ဆန္ဒရှိရဲ့ လား
ကိုဘီလူးက ကြားထဲကနေ မိဘတွေကိုပြောပေးရမှာလား
အဲ့လိုဆိုရင် အဲ့ပြဿနာရဲ့ တာဝန်ကို တစ်ဝက်လောက်ယူရမယ်ထင်တယ် …………
အကြံဥာဏ်ပေးသူများအားလုံး ကျေးဇူ အထူးတင်ပါတယ်…။။။
ကိုဘီလူးကြီးကို အားလုံးရဲ့ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ပါ့ဗျာ၊ တကယ် လက်တွေ့သမားပေပဲကိုး၊ လေးစားတယ်၊
တနေ့တာ အမောလေးတွေထဲက အမောသေးသေးလေးတစ်ခု ပြေသွားခဲ့ရပါတယ်၊
ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိလေတော့ အဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းနေရတာပါ၊ ( နယ်ကမို့ပါ)
ပွဲပီးရင် အကြောင်းပြန်ပါအုံးဗျာ သိချင်လို့
ဟုတ်တယ်။ ဖြေရှင်းပြီးသွားရင် ဖြေရှင်းနည်းလေး တင်ပေးပါဦး။ လက်တွေ့ဖြေရှင်းနည်းလေး မှတ်သားထားချင်လို့။
ဒီကိစ္စကဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ စူပါမာကတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဈေးဆိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်
ကျွန်တော်လည်းမြင်ဖူးပါတယ် ဖြစ်သင့်တာကတော့ ကလေးကို သူယူလာတဲ့ပစ္စည်းကို သူ့နေရာသူကိုယ်တိုင်
သွားထားခိုင်းပြီးမှာ နောက်ဒီလိုမျိုးမလုပ်သင့်ကြောင်း မလုပ်ရကြောင်း အေးအေးဆေးဆေးပြောဆိုဆုံးမပြီး
ပြန်လွှတ်လိုက်ရမှာပါ အခုတော့ကလေးမှာ တဒင်္ဂလိုခြင်စိတ်ကလေးကြောင့်လုပ်မိရာက ခိုးမှုလည်းကြူးလွန် မိသလို နားကပ်ပျောက်ကြောင်း မိဘကိုလိမ်လည်မိကြောင်းလည်း ကြူးလွန်မိသွားပြီး နားကပ်လည်းဆုံရှုံး
ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ် ဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းကတော့ ရှိပြီးသားပါ။
ဟုတ်တယ် ကလေးပဲ မသိလို့ လုပ်မိတာ အေးအေးဆေးဆေး ဆုံးမပေါ့။ နားကပ်ချွတ်ယူထားတာတော့ မကောင်းဘူးထင်ပါတယ်။